Maamullada iyo odayaasha dhaqanka Mudug oo ku hawlan xal-u-helidda amman darrada gobolka. – Radio Daljir
Maamullada iyo odayaasha dhaqanka Mudug oo ku hawlan xal-u-helidda amman darrada gobolka.
Galkacyo, June 09- Waxaa magaalada Galkacyo ka socda dadaallo nabadeed oo aad u baaxad weyn kuwaasi oo lagu damacsan yahay in wax looga qabto lurta ka dhalan-kata weeraradii dhimashada iyo dhaawaca gaystay ee ka kala dhacay xaafadda Wadajir ee Galkacyo iyo tuulada Balli-busle.
Dadaalladaan nabadeed ee ka socda Galkacyo ayaa ah kuwo labo waji leh ayna ku kala hawllan yihiin maamulla labada dhinac oo nabadda iyo wada-noolaansha ku baadi-goobaya hab nidaam-maamuleed iyo dhinaca kale oo odayaasha dhaqankuna ay wadaan qorshe kaalintooda dhaqameed ee xal-u-helidda mushkiladihii dhacay.
Warar hordhac ah oo laga helayo maamullada iyo odayaasha dhaqanka ee isku hawlay ka hor-tagidda dhibaato kale oo dhacda ayaa sheegaya in dhinacyadu isla qaadeen waxkasta in nabad iyo wadahadal lagu dhammeeyo, loona guntado sidii aysan hurgumo colaadeed u reebeen dhacdooyinkii weerar.
Iskasta oo aysan jirin illaa haatan wax war ah oo dhinacyada kala duwani ay war-baahinta siiyeen hadda waxaa la filayaa maalmaha soo socda in uu dhaco shir weyn la isku soo hor-fariisanayo, laguna damacsan yahay in looga falanqoodo hawlaha amniga iyo arrimihii dhacay intaba.
Ma ahan markii ugu horraysay oo falal aargoosi iyo kala aanaysi ah ay ka dhacaan gobolka Mudug hase-ahaatee waxaa ugub ah dhacdooyinkii labada ahaa ee ka kala dhacay xaafadda Wadajir ee magaalada Galkacyo iyo tuulada Balli-busle kuwaasi oo ay ka dhasheen khasaaro dhimasho oo gaarsiisan 15 ruux iyo dhaawac ka badan 25 qof, kaddib weeraro gaadmo ah oo la qaaday.